हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहः कांग्रेसको धारण कि महामन्त्रीको मात्रै ? « News24 : Premium News Channel
हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहः कांग्रेसको धारण कि महामन्त्रीको मात्रै ?
काठमाडौं । नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्षतालाई अंगिकार गरेको छ । संविधान बनाउन गरिएका आन्दोलन र संविधान निर्माणमा ‘अगुवाई’ गरेको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसभित्र पुनः हिन्दू राज्यको बहस सुरु भएको छ । त्यो पनि पार्टीका एक जना महामन्त्रीले हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्नेसम्म बताएका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गर्न पुगे । पञ्चायतकालिन राजनीतिमा सक्रिय केही दलबाहेक कांग्रेस पनि धर्म निरपेक्षतामा आइपुग्यो । कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनले गणतन्त्र सहित धर्म निरपेक्षतालाई आफ्नो राजनीतिक धार भएको स्वीकार ग¥यो । यसलाई १२ औं महाधिवेशनले अंगिकार गर्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरेको छ ।
राज्यको पुनर्संरचनाको विषयः
‘धर्म निरपेक्ष राज्यको घोषणा भइसकेपछि प्रत्येक व्यक्ति र समुदायको धार्मिक आस्था र उपासनाको स्वतन्त्रता र हक प्रत्याभूत हुन्छ ।’
महाधिवेशन मार्फत नै स्वीकार गरेका विषयमा पुनः सुरु भएको बहसलाई कांग्रेसले अब कसरी लिन्छ ? २०७४ सालको निर्वाचनमा जारी घोषणा पत्रमा पनि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने कुनै एक धर्मका विषयमा वकालत नगर्ने उल्लेख छ । तर, महामन्त्री संशाक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रमै हिन्दू राज्यका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
महामन्त्रीले बोलेका विषय कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो कि होइन ? के कांग्रेस अब हिन्दू राज्यका लागि जनमत संग्रहमा जान्छ ?
महामन्त्रीको अभिव्यक्ति विधानतः पार्टीको आधिकारिक धारणा हुनुपर्ने हो । कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई पार्टीका धारणाहरु पार्टी निकायमा प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ । अर्थात महामन्त्रीका अभिव्यक्ति पार्टीका आधिकारिक धारणा हुन्छन् । महामन्त्री जस्तो व्यक्तिले महाधिवेशनले यसअघि पारित गरेका विषयमा बोल्न उपयुक्त हो कि होइन ?
महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्ति आधिकारिक भए पनि नभएपनि महासमिति बैठकमा हिन्दू राज्यको विषयले प्रवेश पाउने निश्चित जस्तै छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरु धर्म निरपेक्षताका कट्टर पक्षपाती छन् । हिन्दू राष्ट्रको विषयले कांग्रेसभित्रको किचलोलाई अझ बढाउने देखिएको छ ।